တစ်ရက်လျှင် 1% တစ်နှစ် 365% ရရှိသည်။
DRIP အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကျူတိုရီရယ်လမ်းညွှန်
DRIP ကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
DRIP ကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း
DRIP 8% ငွေသားပြန်အမ်းခြင်းနှင့် ဆုလာဘ်များ
DRIP Garden ဖြင့် နေ့စဉ် 3% ကို ရယူပါ။
အခမဲ့ Altcoin သတိပေးချက် Generator
ဇူလိုင် 25, 2021 ဇူလိုင် 14, 2021 အားဖြင့် cryptomaster
တက်လိုက်ပါ။ 8% DRIP ငွေသားပြန်အမ်းခြင်း။ သင်၏ DRIP အပ်ငွေပေါ်တွင် (အချိန်ကန့်သတ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်း)
အပေါင်းအသင်း ညွှန်းဆိုကုဒ်ကို သုံးပါ- 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
သင်သည် DRIP အတွက် စာရင်းသွင်းသောအခါ။
ပါဝင်ပြီးပါက၊ သင့်အား DRIP မှ ဒေါ်လာတစ်သန်းအထိ ဒေါ်လာတစ်သန်းရရန် အကြံဉာဏ်များ၊ အကူအညီများနှင့် ဗျူဟာများပိုမိုရရှိရန် ဖိတ်ကြားထားသောတစ်ခုတည်းသော "DRIP Success" Telegram အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
အကောင့်ဖွင့်ပြီးနောက် သင်၏ဆုလာဘ်များအတွက် [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
DRIP Ebook၊ သတင်းနှင့် အကြံဉာဏ်များကို ရယူရန် အကောင့်ဖွင့်ပါ။
သင့်အီးမေးလ် privacy ကို ကျွန်ုပ်တို့ လေးစားပါသည်။
အမျိုးအစားများ Drip သတင်း Post navigation
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာ DripCommunity.org ကိုတည်ထောင်သူနှင့် ဖန်တီးသူ Jeff ဖြစ်ပါသည်။ DRIP ကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း. ဤဆိုက်သည် Drip အတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် သင်၏အချိန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် Drip ဖြင့် လျင်မြန်စွာထပြီး လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါင်းအသင်းလိပ်စာဖြင့် DRIP ကိုပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ဤဆိုက်ကို ပံ့ပိုးကူညီပါ- 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
ဤဆိုဒ်ကို အဘယ်ကြောင့် ပံ့ပိုးသင့်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သင့်အား DRIP ရှိ အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေးခွန်းများအတွက် ကျွန်ုပ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
ခလုတ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ပါ၊ ပရိုဂရမ်သည် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်အကောင့်များအားလုံးကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးမည် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။
DRIP Run Automation သည် DRIP ဖြင့် ငွေရှာရန်အတွက် အပြည့်စုံဆုံး ပရိုဂရမ်အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အင်္ဂါရပ်များစွာ ပါရှိသည်။
Manor Farm သည် Binance Smart Chain Network (BSC) ရှိ အထွက်နှုန်းများသော စိုက်ပျိုးခြင်း/ချေးငွေပရိုတိုကောတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောဆုလာဘ်များကို ဖန်တီးပေးသည့် ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
DRIP အတွက် တရားဝင် Telegram Group
DRIP ဖန်ဆင်းရှင် ကြေးနန်းစာ
Slither - DRIP နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု
The Manor Farm နှင့် The Animal Farm - ကြိုတင်ရောင်းချမှု၊ မွေးမြူရေးစက်ကိရိယာများ
DRIP စာချုပ် လင့်ခ်
USD သို့ BNB ငွေလဲလှယ်နှုန်း
DRIP Telegram တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်း
နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်းကိုရယူပါ- /[email protected]
ယနေ့စျေးနှုန်းကိုရယူပါ- /[email protected]
နောက်ဆုံး ကုန်သွယ်မှု 20: /[email protected]
ထိပ်တန်း ငွေပေးငွေယူများ- /[email protected]
ရောင်း Volume ဝယ်ပါ- /[email protected]
ထိပ်တန်းအပ်ငွေ 24 နာရီ- /[email protected]
DRIP သည် DeFi အားလုံးတွင် #4 အဆင့်ရှိသည်။
Manor Farm ကြော်ငြာများအတွက် တင်ပြချက်များ
DRIP တိုကင် 0x20f663CEa80FaCE82ACDFA3aAE6862d246cE0333
ရေပန်း (လဲလှယ်) 0x4Fe59AdcF621489cED2D674978132a54d432653A
Faucet (အဟောင်း) 0x682D01dfE0b4D8B3A614487e1e3815E18fC3d4E0
Faucet (အသစ်) 0xFFE811714ab35360b67eE195acE7C10D93f89D8C
(Forex အနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေကို လျှော့ချလိုက်သောအခါ Faucet စာချုပ်လိပ်စာ ပြောင်းသွားသည်)
ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင် မည်သည့်အရာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် မရှိပါ။ ဤအချက်အလက်ကြောင့် သင်ရနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ အမြတ်များ သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် စာရေးသူနှင့် ထုတ်ဝေသူက မည်သည့်တာဝန် သို့မဟုတ် တာဝန်ခံမှုမှ မယူပါ။ ဝဘ်ဆိုက်တွင် တွဲဖက်လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။
Dripcommunity.org သည် DRIP ကို ရိုးရှင်းသော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ရှင်းပြရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းလိပ်စာဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ- 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289 အခမဲ့ altcoin အချက်ပေး ဂျင်နရေတာ script ($100 တန်ဖိုး) နှင့် ကျွန်ုပ်ထံမှ ကြေးနန်းအကူအညီကို ရယူရန်။
© 2022 Drip - တစ်ရက်လျှင် 1% ၊ တစ်နှစ်လျှင် 365%
DRIP ebook (အခမဲ့) ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
Copy လုပ်ဖို့ နှိပ်ပါ။
20% ထပ်တလဲလဲ တစ်သက်တာ လျှော့စျေး
Soft Launch - DRIP လည်ပတ်မှု အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
DRIP Run Automation သည် ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ရုံဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်အကောင့်အားလုံးကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးမည် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။ ကူပွန်ကုဒ်ကို သုံးပါ- Launch20off
DRIP 8% ငွေသားပြန်ပေးသည့် အစီအစဉ်
တက်လိုက်ပါ။ 8% DRIP ငွေသားပြန်အမ်းခြင်း။ လွှဲပြောင်းမှု ID ကို အသုံးပြု၍ DRIP ကို သင် ငွေသွင်းသည့်အခါ 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
Deposit5to 12 drip – 5% bitcoin ငွေသားပြန်အမ်းခြင်း။
13 drip ကို အများဆုံး 30 drip – 8% DRIP ငွေသားပြန်အမ်းရန် အပ်နှံပါ။
သင်၏ငွေပြန်အမ်းရန်အတွက် သင့်သူငယ်ချင်းလိပ်စာနှင့် သင်၏ drip deposit ၏စခရင်ပုံတစ်ခုနှင့်အတူ [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ကိုသွားပါ။ Manor ခြံ
၁။ "Drip Liberation" လင့်ခ်ကိုသွားပါ၊ ၎င်းထဲသို့ BUSD သို့မဟုတ် BNB အပ်နှံပါ။
2. DRIP/BUSD LP တိုကင်ရယူပါ။
3. DRIP/BUSD LP တိုကင်ကို Drip Garden တွင်ထည့်ပါ။
4. LP Token တွင် တစ်ရက်လျှင် 3% ကို ရယူပါ။
5. သင်၏မျိုးစေ့ (LP) ကို နေ့စဉ် ရောနှောပါ။
English	 Arabic	 Armenian	 Afrikaans	 Azerbaijani	 Albanian	 Bosnian	 Bulgarian	 Bengali	 Basque	 Belarusian	 Chinese	 Croatian	 Catalan	 Cebuano	 Czech	 Dutch	 Danish	 Esperanto	 Estonian	 French	 Finnish	 German	 Greek	 Galician	 Gujarati	 Georgian	 Hebrew	 Hungarian	 Hindi	 Indonesian	 Italian	 Icelandic	 Japanese	 Korean	 Kazakh	 Kurdish	 Kannada	 Khmer	 Lao	 Lithuanian	 Latvian	 Malay	 Malayalam	 Macedonian	 Moroccan Arabic	 Marathi	 Mongolian	 Nepali	 Persian	 Punjabi	 Portuguese	 Polish	 Pashto	 Russian	 Romanian	 South Azerbaijani	 Spanish	 Serbian	 Swedish	 Swahili	 Slovak	 Sinhala	 Slovenian	 Sindhi	 Scottish Gaelic	 Tagalog	 Telugu	 Tamil	 Tatar	 Turkish	 Thai	 Uighur	 Ukrainian	 Urdu	 Uzbek	 Vietnamese	 Welsh	 Myanmar